International Archives - Page4of6- Gloria News Journal
ကက်သလစ်ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုက မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ ဆက်ပေးကြရန် အင်္ဂလန်နိုင်ငံအား တိုက်တွန်း
ရန်ကုန်၊ မေလ ၆၊ ၂၀၁၆
အင်္ဂလန်နိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ မေလ ၈ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ အလည်အပတ်သွားရောက်တော်မူသော ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုက လွန်ခဲ့သော ခက်ခဲသည့်နိုင်ငံရေးကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီခဲ့ကြသ..
လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကို ဥပဒေပြုသောအင်္ဂလန်နိုင်ငံသည် ဘုရားမဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ကာဒီနယ်ဆရာတော်ကြီး ဂျော့ပဲလ်က ဝေဖန်တော်မူ
ဗာတီကန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၁၆
ကာဒီနယ်ဆရာတော်ကြီး ဂျော့ပဲလ်က လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်ပြဌာန်းလိုက်သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံအား ဘုရားမဲ့သောနိုင်ငံ ဖြစ်သည်ဟု အင်္ဂလန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကာမရွန်းကို ဝေဖန်တော်မူလိုက်သည်။ ဆရာတော်ကြီးက လိင်တူလက် ထပ်ခြင်းကို တရားဝင်ဖြစ်စြေ..
ပြည်သူများ၏မဲများကို အလှူဒါနပြုခြင်းဖြင့် ရယူခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် မနီလာကာဒီနယ်တာကလေးက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရေးသမားများကို သတိပေးတော်မူ
မနီလာ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၁၆
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တော်၏ကာဒီနယ်လူးဝိစ်အန်တိုနီအိုတာကလေးက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည့်အချိန် တွင် နိုင်ငံရေးသမားများက အလှူဒါနပြုခြင်းကို ဗန်းပြလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ထောက်ခံမဲကို ရယူခြင်းအား မလုပ်ဆောင်ကြ ရန် ဖေဖော်ဝါရ..
ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ ခေါင်းဆောင် ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်နှင့်ရုရှားအော်သဒေါ့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တို့ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်အတွင်း ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဗာတီကန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂၊ ၂၀၁၆
(၁၁) ရာစုကစပြီး တင်းမာမှုရှိလာပြီးနောက် ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူသော ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်နှင့်ရုရှားအော်သဒေါ့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူသော ကီရီလ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော် အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ..
ခရစ်စမတ်ပွဲနေ့တွင် ရုံးပိတ်သူ၊ ပွဲကျင်းပသောမူဆလင်ဘာသာဝင်များကို ဘရူနိုင်းဘုရင်က ထောင်ဒါဏ် (၅) နှစ် သတ်မှတ်
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၏ ဘုရင် ဆူလ်တန်ဟာဆာနာ ဘိုကီယာက မူဆလင်ဘာသာဝင်များအား ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ (၂၅) ရက်နေ့၊ ခရစ်စမတ်နေ့တွင် ပွဲလုပ်ခြင်းနှင့် ရုံးပိတ်ခြင်းတို့ကို တားမြစ်လိုက်ပြီး ၄င်းတားမြစ်ချက်ကို မလိုက်နာသူများကို ထောင်ဒါဏ်..
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ပြဌာန်းမည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဗာတီကန်နိုင်ငံက ဗီယက်နမ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးနေ
Vietnamese Catholic dignitaries march inaprocession foramass on the occasion ofapastoral visit by Cardinal Fernando Filoni (not pictured), prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, in Hanoi on January 20, 2015. The cardinal is onafive-day pastoral visit to Vietnam. AFP PHOTO / HOANG DINH NAM / AFP / HOANG DINH NAM
ဗာတီကန်နိုင်ငံမှ ရဟန်းမင်းကြီး၏သံတမန်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ပြဌာန်းမည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုထားသည့်ပ�..